I Mobile IQX ကို thai Offical Firmware ပြန်တင်နည်း ~ mgkhainghtoo
I Mobile IQX ကို thai Offical Firmware ပြန်တင်နည်း
20:51 မောင်ခိုင်ထူး No comments
i Mobile IQX ဖုန်းတွေကို ကလိလွန်ပြီ Logo မှာရပ်နေပြီတိုင်ပတ်နေပြီခေါင်းမီးတောက်နေတဲ့ဘော်ဒါတွေ
် iqx firmware တင်နည်းကို တင်ပေးလိုက်တာပါ
I Mobile IQX thai Offical Firmware ပြန်တင်ခြင်တဲ့ ဘော်ဒါများအတွက်
အရင်ဆုံး firmware မတင်ခင် ကွန်ပျူတာမှာ usb driver ကိုအရင်သွင်းထားရမှာပါ ဒါမှ firmware တင်လို့ အောင်မြင်မှာပါ လိုအပ်တဲ့ ဖိုင်းတွေ အောက်မှာ ဒေါင်းလိုက်ပါ
IQX Firmware ကိုဒေါင်းရန်
ဒါဆို firmware တင်ဖို့ အတွက် Flash Tool ဖိုဒါထဲကအပြာရောင်နဲ့ Flash Tool စာတန်နေရာမှာနှိပ်ဖွင့်ပါဒီပုံအတိုင်တက်လာပါမယ်
ပြီရင် ဇယာကွက်ပုံစံ flash toot တက်လာပြီဆိုရင်ဒုတိယစာတန် Seatter-Loading နေရာမှာနှိပ်ပြီ စောစောက ဒေါင်းထားတဲ့ဖိုင်းဝဲလ်ဖိုဒါ ကိုဖွင့်လိုက်ပြီ အထဲက MT65xx........ စာတန်ကိုရွေးပေးလိုက်ပါ
ဒါဆိုအာလုံအိုကေနေပါပြီ firmware တင်မဲ့ဖုန်းမှာ အရင်ဆုံ ဖုန်းကိုပိတ်ပြီ ဘတ်ထရီးဖြုတ်လိုက်ပါ ပြီရင်
usb ကြိုးထိုးပြီချတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါ ပြီရင်ဘတ်ထရီ ပြန်ထဲပြီ ဒီအတိုင်ထားလိုက်ပါ ပါဝါဖွင့်စရာမလိုပါဘူ
ကွန်ပျူတာကဖုန်းကိုသိပြီဆိုရင် အပေါ်က downloand နေရာမှာနှိပ်ပြီ ထားလိုက်ပါ ခဏနေအောက်နာမှာ
ရာခိုင်နှုန်တန်တက်လာပါမယ် ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်ပြည့်ပြီဆိုရင် ဖုန်းကိုဖြုတ်လိုက်ပြီ ဘက်ထရီပါထုတ်လိုက်ပြီ
ဒီပုံမျို အစီမ်ရောင်းအ၀ိုင်လေးပေါ်လာရင် အာလုံးအောင်မြင်ပါပြီ ဖုန်းကိုချိတ်ဆက်မူကိုဖြုတ်လိုက်ပြီ
ဘက်ထရီးခဏပြန်ထုတ်လိုက်ပါ ပြီရင်ခဏထားပြီ ဘက်ထရီးပြန်တက်ပါ ပြီရင်ပါဝါကိုဖွင့်ပေးပြီလိုက်ပါ
ဒါဆိုအာလုံးအိုကေပါပြီ firmware တင်စမှာ boot တက်နည်းနည်းကြာပါတယ်
Credit by SmartGhost
imobile IQ 5.3 ကို thai offical Firmware ပြန်တင်နည...
Nokia Lumina (Windows Phone) မှာ မြန်မာဖောင့် ထည့်...
Miracle Android Tool | Nokia Android | Samsung And...
I Mobile IQX ကို thai Offical Firmware ပြန်တင်နည်း...
SMART ZAWGYI -3
Flash Tool Latest Version 0.9.16.0